Music industry ထဲမှာ သီချင်းဝန်ဆောင်မှုအတွက် iTunes နဲ့အပြိုင် လူကြိုက်များနေတဲ့ Spotify ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပါတ်က Taylor Swift လက်ရှိသဘောကျနေတဲ့ သီချင်း ၄၃ ပုဒ်ကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ list ကို Songs Taylor Loves လို့ကို နာမည်ပေးထားပြီး spotify မှာ အစမ်းနားထောင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
အဲ့ list ထုတ်ထားတာကို Taylor ကိုယ်တိုင် သူ့ရဲ့ facebook နဲ့ twitter account တွေမှာ “Songs I’m loving right now ?” ဆိုတဲ့ caption လေးနဲ့ တင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ သီချင်းအမျိုးအစားတော့ တော်တော့်ကိုစုံလင်ပြီး သိပ်ပြီးနာမည်မကျော်ကြားသေးတဲ့ အဆိုတော်အများစုပါပါတယ်။ (အက်မင်ဆို တစ်ယောက်လားပဲသိတာ??)။ ဒီရက်ပိုင်းမှာ နာမည်ရေပန်းစားနေတဲ့ Camila Cabello နဲ့ Kendrick Lamar တို့လို နာမည်ကြီးတဲ့လူတွေလဲပါပါသေးတယ်။ အက်မင့်အကြိုက်နဲ့ညီတာကတော့ Camila လေးရဲ့ Real Friend တစ်ပုဒ်တည်းပါ။ ကျန်တာတွေတော့ သိပ်မသိလို့(လုံးလုံးကိုမသိတာပါ?) ဘယ့်နှယ့်နေမယ်ဆိုတာမပြောတတ်ပါဘူး။
ထူးခြားတာတစ်ခုက သူကိုယ်တိုင်သီဆိုထားတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို list ထဲမှာတွေ့ရတာပါပဲ။ အဲ့သီချင်းကတော့ Delicate ဆိုတဲ့ သီချင်းဖြစ်ပြီး မကြာသေးခင်ကမှထွက်ထားတဲ့ Reputation ဆိုတဲ့ album ထဲကဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကတော့ Delicate သီချင်းဟာ Taylor ရဲ့ ဘဲဟောင်းဖြစ်တဲ့ မင်းသား Joe Alwyn နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးထားတာလို့ပြောကြသလို နောက်ဘဲဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မင်းသား Tom Hiddleston နဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့လဲ ခန့်မှန်းပြောဆိုနေကြပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုရည်ရွယ်လဲဆိုတောတော့ ကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့ Taylor ကလွဲပြီးမသိနိုင်ပါဘူးနော်။
Taylor ကတော့လက်ရှိမှာ သူ့ရဲ့ Reputation World Tour အတွက်လေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ World Tour အတွက် လက်မှတ်တွေကိုလဲ ၂၀၁၇ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလောက်ကတည်းက စတင်ရောင်းချနေခဲ့တာပါ။
သီချင်းတွေကနေ လူတွေရဲ့ ခံစားချက်ကို သိနိုင်တယ်လို့ အဆိုရှိသလိုပဲ Swifties လေးတွေအနေနဲ့လဲ Taytay ရဲ့ playlist ကိုနားထောင်ကြည့်ပြီး သူဘာတွေများခံစားနေလဲဆိုပြီး သူ့ခံစားချက်တွေကိုလိုက်ဖမ်းကြည့်လို့ရအောင် လက်တို့ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
PREVIOUS POST Previous post: Prince Harry ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲမှာ ဖျော်ဖြေမယ့် Ed Sheeran
NEXT POST Next post: Wanna One အဖွဲ့ဝင် Daniel နဲ့ပတ်သက်ပြီး Kpop လောကကို မွှေနှောက်လိုက်တဲ့ Ji Dam